"Ecobank - स्मार्ट निवेश": समीक्षा। इन्टरनेटमा आय
व्यापार, अनलाइन व्यापार
हाम्रो समय मा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता एक धेरै rubles मा इन्टरनेट मा पैसा को लागि देख। धेरै गर्न चासो आय को योजना यस्तो। यो सबै पछि, यो त्यहाँ व्यक्तिगत उपस्थिति लागि कुनै आवश्यकता छ जब, कि राम्रो हुन सक्छ जस्तो थियो, अचम्मको छैन? जब सबै एक आफ्नै मा केवल निर्भर? र अन्त मा, जब काम breakneck गति चलिरहेको, सार्वजनिक परिवहन जान बिहान सबेरै उठ्नु छैन?
यो किनभने यो छ आय को प्रकार धेरै काम मांग यस प्रकारको निरन्तर बढ्दै छ लागि आदर्श देखिन्छ। , सामान्य दिनचर्याबाट "उम्कन" गर्ने प्रयास अनलाइन वाणिज्य तिनीहरूको हात प्रयास गर्ने साधारण नागरिकहरु साथै एउटै क्षेत्रमा शक्तिहरू प्रयास र विद्यार्थीसँग विद्यार्थी - स्थिति भएका काम, वा काम संयोजन गर्न बाध्य छन् जवान, उत्प्रेरणा मान्छे प्रशिक्षण संग। तिनीहरूलाई केही निरंतर जीवित कमाउन अनुमति दिने, एक लाभदायक व्यवसाय खोज्न व्यवस्थापन गर्छन्। अरूलाई केहि छैन भुक्तानी गर्नेछ कुनै पनि ठगी ठोकर हुन सक्छ; वा अरू सोभ्को पैसा लोभ्याउन गर्नेहरूलाई।
इन्टरनेटमा आय: प्रकार
त्यहाँ अनलाइन मुद्रा बनाउन धेरै तरिकाहरू छन्। यस को लागि कसैले कसैले गीत लेख्छन्, साइटहरु imposes, केही किन्छ र resells। कि, वास्तवमा, नेटवर्क राजस्व कमाउन एक विशाल संख्या सुनिश्चित गर्ने उपायहरू। ती सबै जोखिमपूर्ण वा विश्वसनीयता, स्थिरता, र समय आवश्यक लगानी र यस्तो आय जो देखि संलग्नहरू बिना उत्पादन गर्न सकिन्छ।
वास्तवमा, हरेक, सुनिश्चित गर्न उपयुक्त बाटो खोज्दैछ पहुँच यसको उपलब्ध धन प्रयोग गरेर पैसा प्राप्त। तदनुसार, यस क्षेत्रमा जसमा तपाईं एक लाख नेटवर्क पहुँच कम्प्युटरमा प्रयोग गरेर द्वारा कमाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई को एक निवेश मा आय छ।
"नयाँ तरिका" लगानी मा आय
हामी सबै भन्दा को मन मा, निवेशक जो उहाँले जोखिम लिन तयार छ महत्वपूर्ण राजधानी संग एक खेलाडी, प्रतिनिधित्व छ। मानिस एक अनुभवी, जो थियो, "यो Jackpot हिट" त्यो छ, एक स्पष्ट जो के बहुमत छ, एउटा सामान्य, साधारण नागरिकहरु रुचि छ कि छैन। तथापि, "निवेशक" को नेटवर्क अवधारणा केहि हाल को वर्ष मा परिवर्तन। यी मानिसहरू काम गर्न सक्छन् जो रकम कुनै पनि सीमानाहरू, वास्तवमा सबैको लगानी गर्न सक्छन् अब पनि आफ्नै हराएको छ, $ 100 (इलेक्ट्रोनिक मुद्रा, पाठ्यक्रम)। मा "mikroinvestorov" को दिन इन्टरनेटमा नै समय आय मा शानदार पुग्न सक्दैन, यो जस्तो भनेर 20 प्रति दिन प्रतिशत।
यो कसरी सम्भव छ? धेरै सरल - अभ्यास यसलाई राख्नु embody जस्ता प्रणाली "Ecobank - एक स्मार्ट लगानी।" यो कम्पनी मा समीक्षा र यसको काम यसको अस्तित्व को अन्तिम क्षण सम्म प्रणालीको सल्वेंसी सुझाव। आज को रूपमा, तर, कम्पनी पहिले नै संकुचन भएको छ। यो दिवालिया भयो "Ecobank"। यसको गतिविधि को समय बाँकी मा समीक्षा सकारात्मक छन्, र सिस्टम अब उदाहरणका लागि, अवस्थित र आफ्नो मुख्य साइट।
"Ecobank" के हो?
यसको गतिविधि को अवधि को लागि "Ecobank" सानो निवेशक लागि डिजाइन भएको थियो जो एक प्रमुख वित्तीय पिरामिड, भएको छ। यो को सार सबै आकार र उमेरका हरेक अन्य पिरामिड योजनाहरु मा जस्तै थियो। त्यसैले सबैले "Ecobank" पैसा को एक निश्चित राशि तिर्ने द्वारा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। कि पछि, मानिस जस्तै आफ्नो भाग शुल्क गरेका गर्ने लगानीकर्ताले, रूपमा अरूलाई नेतृत्व गर्न कसरी रुचि थियो। कम्पनी मा धन को कुल राशि, यसरी, वृद्धि हुन। depositors को ठूलो संख्या दिइएको, "Ecobank" तिनीहरूलाई प्रत्येक उदार भुक्तानी मा लगानी रकम दिन, उदाहरणका लागि, गर्न प्रतिशत 20 अनुमति हुनेछ। तपाईं (अझै लाभ को 100 प्रतिशत संचित छैन)5दिनको लागि योगदान दुगनी, आज, कुनै पनि बैंक किन्न सक्दैन सहमत हुनुहुन्छ। "- लगानी Ecobank" तर सकिनँ। समीक्षा शायद पहिलो depositors कि प्रमाण हो। मानिसहरू आफ्नो भुक्तानी साँच्चै पाए।
के संग depositors "Ecobank" अर्को भयो?
साथै भविष्यमा उनको योगदान गर्न के भयो बारेमा depositors "Ecobank" सिस्टम भयो के, अनुमान गर्न गाह्रो छैन। रूपमा वास्तविक आय सिस्टम उत्पन्न छैन, यो स्पष्ट छ depositors भुक्तान आयोजकहरु, जहाँबाट लगियो कि पैसा छ। मा उनि नयाँ जम्मा को खर्च मा उपकारको साटो तिरे गर्दै दिन नै 20 प्रतिशत को भुक्तानी को रूप मा यसको प्रतिबद्धता। तसर्थ, पिरामिड अवशोषित, एक सर्कल काम नयाँ को पैसा लगानीकर्ताले, तिनीहरूलाई पहिले तिर्ने। निस्सन्देह, यो व्यवस्था लामो टिक्न थिएन। कार्यालय "Ecobank - स्मार्ट लगानी" समीक्षा गर्न सबैभन्दा चापलूसी भुक्तानी भएनन् गर्दा हो। मान्छे एक आतंक गोल गरेका थिए।
प्रस्थान "Ecobank - एक स्मार्ट लगानी।" को "पछिल्लो" को समीक्षा
अन्ततः, "Ecobank" को नतिजा समय यस्तो लामो अवधिमा सोझो depositors लोभ्याउन कि धेरै अन्य प्राकृतिक पिरामिड योजनाहरु कि जस्तै थियो। वस्तुतः संक्षिप्त प्रणाली, र यो साइट "Ecobank"। अब मान्छे बस राख्नु समीक्षा जान कतै थियो।
यो बावजुद, सामाजिक सञ्जाल मा परिष्कृत समूह को सेट मा, ब्लग र अन्य संसाधन, पहिले बारेमा लिखित जो, "Ecobank - स्मार्ट लगानी" को सेवाहरूमा पृष्ठ सकारात्मक सन्दर्भमा समीक्षा, जहाँ गरे depositors को पैसा बारेमा भगदड र क्रोधित टिप्पणी देखा पर्न थाले। केही पनि यसलाई एउटा त्रुटि विचार, साइट प्रशासन सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा; अरूलाई खलनायक फेला पार्न र तिनीहरूलाई सजाय योजना छन्। एक बस आफ्नो भाग्य आफूलाई resigned, र मात्र भुक्तानी निलम्बन पुष्टि। कुनै पनि राम्रो समीक्षा छैन - मुख्य कुरा अब "स्मार्ट लगानी Ecobank" बारे कुनै एक छ। मान्छे वास्तवमा भयो भनेर बुझे छन्।
समीक्षा विश्वास गर्ने कि नगर्ने?
यो यस्तै लगानी परियोजनाहरूको एक किसिम मा आफ्नो हात प्रयास गरेर, धेरै मानिसहरू प्रशासकहरूले परियोजना द्वारा "kidka" को संभावना सजग छन् र पहिलो आफ्नो पैसा भरोसा छैन भनेर विचारणीय छ। तर, इच्छा, एकै समयमा पैसा बनाउन एउटा सानो लगानी बनाउन र अर्को दिन प्राप्त, लाभ को 20 प्रतिशत, मानिस overcomes। अनुभवहीन "लगानीकर्ताले" पहिलो समीक्षा लागि देख, परियोजना बारे कुनै पनि जानकारी फेला पार्न प्रयास। यो अवस्थामा, कुनै एक प्रत्येक पिरामिड को पहिलो प्रणाली बारे चापलूसी जानकारी छोडेर, पहिलो योगदान गर्न व्यवस्थित गर्नेहरूलाई अनुमति नियमित भुक्तानी, बनाउँछ भन्ने सोच्छ। उदाहरणका लागि, बारे "Ecobank - एक स्मार्ट लगानी," टिप्पणी, चापलूसी थिए, तर यसलाई दिइएको छैन लामो र स्थिर सञ्चालन ग्यारेन्टी। वास्तवमा, एउटै अवस्था अन्य सबै पिरामिड संग पालन गरिएको छ। पहिलो depositors देखि सकारात्मक प्रतिक्रिया बाद को क्रोधित टिप्पणी प्रतिस्थापन छन्।
यो वित्तीय पिरामिड काम गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर?
वित्तीय पिरामिड सामना गर्न चाहे को प्रश्न मा, unequivocally छैन जवाफ गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह, हरेक समझदार व्यक्ति यसलाई एक हुन सक्छ हालैको योगदानकर्ता को भाग हो किनभने यो, एक विशाल जोखिम छ भनेर बुझ्नुहुन्छ। र, को पाठ्यक्रम, कुनै ग्यारेन्टी पिरामिड आयोजकहरु दिनुभएन। तर जो कुनै पनि प्रयास बिना पैसा प्राप्त प्रक्रिया मा रुचि छैन? कसले, काम बिना, एक दिन मा 20 प्रतिशतले आय कमाउन चाहनुहुन्छ छैन? निस्सन्देह, सबै। र, पाठ्यक्रम, प्रत्येक पिरामिड मा अन्त मा अनुभवहीन "newbies" को खर्च मा जित्यो थियो जो आफ्नो "पहिलो लगानीकर्ताले" छ। प्रत्येक सहभागी पर्याप्त र उहाँले "काली मा" हुन ठान्नुहुन्छ भन्ने धूर्त अनुभव महसुस। अन्तिम परिणाम, यो अक्सर पिरामिड एक विजेता, किनभने उनको काम यी "अनुभव" योगदानकर्ता धेरै छ।
यो अनलाइन कमाउन को तरिकाहरू गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर?
एक पिरामिड पैसा गुमाउने को सम्भावना, को पाठ्यक्रम, इन्टरनेट मा काम पाउन प्रयास अर्थ preclude छैन। तिनीहरूले पहिले नै उल्लेख रूपमा, एक ठूलो रकम छ, हो। मुख्य कुरा नेट मा कमाउन चाहने जो कोहीले लागि बुझ्न आवश्यक छ कि - यो पैसा तिर्न केवल नेटवर्क पनि गर्छ भन्ने कुरा हो। तिनीहरूले वास्तविक जीवन मा जस्तै हुन, वा आफ्नै श्रम, वा धूर्त प्राप्त गर्न आवश्यक छ। कम से कम, म कुनै पनि कम्पनी वा भन्ने आशा व्यक्तिगत, मूर्ख (कम्तिमा सम्झना - पहिलो विपरीत दावी समीक्षाएँ जो, तर अन्ततः धोका रिस तरिका दिनुभयो "Ecobank - निवेश",) भर्खरै को एक उच्च प्रतिशत दिन तयार । यो इन्टरनेट सहित पैसा, कतै बाहिर देखा कि सक्दैनन् र तपाईंले तिनीहरूलाई तिर्न सिर्फ एक हुनेछैन बुझे गर्नुपर्छ।
इन्टरनेट-दोकान "Trubkoved": ग्राहक समीक्षा र दायरा विशेषताहरु
कसरी इन्टरनेट मा चित्रकला बेच्न: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
"उचित मालिकको": ग्राहक समीक्षा
जर्मन बाइनरी रोबोट: समीक्षा। जर्मन बाइनरी रोबोट कसरी हटाउने?
कसरी आईफोन 5s मा जीपीएस सक्षम: निर्देशन, सुझाव, सल्लाह
ओवन "सूर्योदय" - प्रकार, विशेषताहरु
Hypomanic मनोविज्ञान र यसको सुविधाहरू
कसरी एक्सेल मा एक XML फाइल सम्पादन लागि खोल्न: केहि सरल तरिका
सम्बन्धको डिग्री: ऐतिहासिक र कानुनी विशेषताहरू
शिक्षा को एक माध्यम रूपमा जनावरहरूलाई बालिका लागि खेल
ट्रक र कार मर्मत चिनियाँ ट्रक
Anapa। होटल "Villa डेल सोल": यात्री समीक्षा
च्याउ को क्रीम - स्वादिष्ट पकवान
नेदरल्यान्ड राजधानी विश्वभरिबाट पर्यटकहरु आकर्षित